Nagu saabsan - Shanghai Fepton Qalabka Caafimaadka Co., Ltd.
Shanghai Fepton Medical Qalabka Co., Ltd. oo la aasaasay 2009, oo ah shirkad tiknoolajiyad sare leh, oo ku lug leh cilmi baaris, soo saar, iibinta gudaha & dibedda, adeegga OEM / ODM. Shirkaddu waxay leedahay qalab caafimaad oo kala duwan oo qalliin si loo abuuro jawi caafimaad oo wanaagsan. Shirkaddayadu waxay ku hawlan tahay hawlgalka taxanaha LED-ka laambad-yar, miis hawlgal caafimaad, taxane hawleed caafimaad, sida qolka qalliinka suunka ganaax, suunka ICU, munaaraddii sudhanayd, oo ahayd soo saaraha ugu horreeya ee qalabka caafimaadka ee warshadaha caafimaadka.
Shirkaddayadu waxay bixin doontaa cilmi-baaris wax soo saar, horumarin, qaabeynta rakibaadda iyo tababarka si ay u siiso adeeg wanaagsan macaamiisha. Hadda waxaa jira in ka badan 100 shaqaale, 2 shirkado hoosaadyo, 1 xarun cilmi baaris & horumarineed iyo 2 warshadood oo ku jira shirkadeena. Shirkaddu waxay ka gudubtay ISO9001: 2015 iyo ISO13485: Shahaadada Nidaamka Maareynta Tayada ee 2018, oo sidoo kale liis garaynaysa Shirkadda Teknolojiyada Sare ee Shanghai. Waxay adeegsaneysaa nidaamka ERP si loola socdo maareynta wax soo saarka iyo hirgelinta heerarka tayada adag si habka wax soo saarka oo dhan loo raad raaco.
Fepton waxay dadaal la samayn doontaa iskaashatooyin, waxayna la wadaagi doontaa macmiilka caalamiga ah ruuxa hal-abuurnimada iyo hagaajinta, si horay loogu socdo. warshadaha caafimaadka iyo caafimaadka. Si loo helo xalka qolka hawlgalka iyo ICU, khadka wax soo saarka waxaa ka mid ah:
Nidaamka isdaahirinta caafimaadka
Mashruuca gaaska caafimaadka
Hawlgal iftiin-hoos u yar
Qalabka qolka hawlgalka
Naqshad R & D
Caafimaadka Fepdon waa mid ka mid ah soo saarayaasha ugu waaweyn ee qalabka caafimaadka ee ICU OT ee ku yaal Shanghai, Shiinaha. Laga soo bilaabo xulashada alaabta ceyriinka ilaa wax soo saarka, waxaan si adag u raacnaa shuruudaha shahaadada ISO, CE si loo hubiyo in isbitaalada iyo macaamiisha ay ku fiicnaan karaan khibrada alaabtayada. Waxaan ku siin karnaa macaamiisha waaweyn adeegyada OEM iyo ODM muddada fog.
Daacadnimo iyo hufnaan.
Qiimaha la siiyay macaamilka iyo qanacsanaanta macaamilka.
Horumar joogto ah iyo horumar.
Xallinta dhibaatooyinka degdegga ah.
Maareyn wax soo saar leh, wax ku ool ah oo firfircoon.
Tayo sare leh.
Isticmaalka hufan ee ilaha.